वर्षमा चारवटा गीत गाउनेछु - साप्ताहिक
वर्षमा चारवटा गीत गाउनेछु
 वसन्त सापकोटा, गायक/संगीतकार
‘क्यारम त नि...’ गीत लोकप्रिय भएको हो ?
कम समयमै दर्शक तथा श्रोताको जिब्रोमा झुन्डिन सफल भएको छ । यसका साथै थुप्रै दर्शकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको छु । यो हिसाबले मैले पहिलो पटक आफ्नो स्वरमा रेकर्ड गराएको गीत लोकप्रिय भएको मानेको छु ।
संगीतकारका रूपमा स्थापित भएको स्रष्टालाई गायक बन्ने आवश्यकता किन आइपर्‍यो ?
हरेक संगीतकार सुरुमा गायक नै हुन्छ । म पनि पहिले गायक बन्न नै यो क्षेत्रमा आएको थिएँ । संगीतको प्रशिक्षणका क्रममा पनि मैले गायन नै सिकेको थिएँ । कालान्तरमा मेरो संगीत तथा शब्द रचना लोकप्रिय भएपछि मात्र मेरो गायन कला ओझेलमा परेको हो ।
‘क्यारम त नि’ नै गाउने निर्णय कसरी गर्नुभयो ?
गण्डकी क्षेत्रतिर ‘के गरौं त नि’ लाई छोटकरीमा ‘क्यारम त नि’ भनिन्छ । मेरी गीतकार श्रीमती प्रभा आचार्यले त्यही मौलिक शब्दलाई आधार बनाउँदै गीत रचना गरिन् । यसमा प्रयोग गरिएको अर्को थेगो ‘बोल माया बोलीको रसैले, बोली टिपी लाँदैन कसैले..’ पनि मलाई मन परेको थियो । लोकशैलीको यो गीतलाई आधुनिक स्वरूप दिँदा स्रोतालाई कर्णप्रिय लाग्छ भन्ने सोचेर गाएको हुँ ।
सांगीतिक पक्षको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?
म प्राय: लोक शैलीमा आधारित गीत बनाउँछु । फिगर कोकोकोला, गाला रातै, सिम्पल–सिम्पल कान्छीको, स्लोली–स्लोली आदि गीतमा पनि मैले लोकशैलीलाई फ्युजन गरेको थिएँ । अहिले गैरचलचित्रको गीतमा पनि त्यही शैली प्रयोग गर्दा यो गीत मेलोडियस बनेको छ ।
यो गीतको म्युजिक भिडियो कस्तो छ ?
गीतको भाकाअनुसार नृत्यप्रधान भिडियो बनेको छ । निर्देशन दीपेन्द्र केसीले अभिनेता पल शाह तथा अभिनेत्री नीता ढुंगानालाई गीतको तालमा नचाएका छन् । समग्रमा भिडियोले गीतलाई अझ माथि उठाएको छ ।
भविष्यमा अन्य गीतमा तपाईंलाई सुन्न पाइने सम्भावना कत्तिको छ ?
म हरेक तीन–तीन महिनामा आफ्नो स्वरको एउटा गीत सार्वजनिक गर्ने अभियानमा अघि बढेको छु । वर्षमा चारवटा उत्कृष्ट गीत गाउने लक्ष्य छ ।